I-Palmistry Basics - Ukuhlola iLines kwiPalm yakho
Ukuqwalasela iMida kwiPalm yakho
Iinkalo ezintathu ezisisiseko ezifunwa ngumfundi wesundu, ngelixa uhlalutya izandla zakho ngexesha lokufunda kwakho kwintetho : Iimitha-Iifom-Iifom. Eli nqaku lihlola iingongoma eziphambili kunye neminye imigca emancinci eyaziwayo. Iifoto ziza kukunika ingcamango jikelele malunga nokuba ukhangele entendeni yesigxina. Kwimizila emine emikhulu, ezi zintathu (intliziyo, intloko kunye nobomi) kufuneka kube lula ukuba ufumane ezandleni zakho. Umgca wesine wesigxina sesigxina sakho. Ngamanye amaxesha umgca uphukile okanye uphelile, okanye ungase ulahleke ngokupheleleyo. Musa ukuxhalaba ukuba awukwazi ukufumana lula umgca wakho wokugqibela okanye ukuba nayiphi na enye imigca emininzi iboniswe apha okanye iyanzima ukufumana ezandleni zakho. Lo ngumsebenzi womfundi wesundu ukuchaza. Imigca elahlekileyo, eyahlukileyo, okanye eboshweyo inika izikhombisi malunga nezinto ozenzayo kunye nendlela oza kuphila ngayo ubomi bakho.
Ukufakwa: I-Upper Palm Heart Line.
Umgca wentliziyo ugijimisa ngaphesheya kwintendelezo yesandla sakho.
I ntliziyo yeZiseko zoTshintsho
Umda omude: Ulungeleleneyo, Uxhomekeke kumlingane
Uxinzelelo : Unxinezelekile
Umgca wokusilela: Uhlobo oluthileyo, Intliziyo engenamandla
Umzila ochanekileyo : Iimvakalelo ezinzulu
Umgca ogqityiweyo: I- Intellectual Bent
Umda ophukileyo: Ubuhlobo obunzima
Umgca woMda : Ulwalamano oludibeneyo, ubudlelwano boKarmic
Umgca ogqityiweyo: Intliziyo, Intlungu
Ukungabikho komsebenzi: Ukungabi nantloni, iLogic ilawula intliziyo
Ukufakwa: Ephakathi kweNtloko yeNtloko yePalm.
Umgca wekhanda ubonisa ukuqonda kunye nokuqiqa.
Eyona ntloko yeNtloko
Ixesha elide: Ukunyaniseka
Umfutshane: Uhlakaniphile, intuitive
Uxinzeleleko: Imemori egqibeleleyo
Umgca wokusilela: Inkumbulo engalunganga
Umgca ochanekileyo: Izinto eziphathekayo
Umgca ophukileyo: Ukuphazamiseka
Uxinzelelweyo Umgca: Ukudideka kwengqondo
Umgca ogqityiweyo: Utshintsho lomsebenzi
Umgca oBini: Unetyala, Uphefumlelwe ngu-Muse
Ukungabikho komnxeba: Ubuvila, ukungalingani kwengqondo
Ukubekwa: Kuphakathi kwinqanaba elisezantsi.
Umgca wokuphila uqala kwindawo ethile phakathi kwesithupha sakho kunye nesicatshulwa somunwe kwaye ugijimele ukuya kwiseba. Umgca wobomi ngokuqhelekileyo uphawulwe.
Uhlobo loLwazi oluPhambili loBomi
Umda omude: Impilo enhle, ubungakanani
Umfutshane: Inkolelo yokuba umgca wokuphila omfutshane uthetha ubomi obufutshane. Ukuba umgca wobomi ufutshane, jonga eduze kwezinye iimpawu (eziphukile, ezinzulu, eziphazamisayo, njl.).
Uxinzeleleko: Ubomi obunobomi
Umgca wokusilela: Amandla aphantsi
Umda ophukileyo: Ukulwa, Ukulahleka
Umzila oxinyiwe: Iindlela ezininzi zokuhamba (intsingiselo yokuba indlela yakho yokuphila i-multifold)
Umgca ogqityiweyo: Iintsingiselo ezahlukeneyo kuxhomekeke kwi-fork ukubeka esandleni. Iifoloko ngokubanzi zibonisa ukuguquka okanye utshintsho lobomi. Nangona zikwa kuthetha ukutshatyalaliswa okanye ukwahlula amandla.
Umgca oMibini : Umlingane noMoya Mate , okanye kukho umntu osondeleyo (umhlobo okanye ilungu losapho) okhonza njengomgcini okanye umgcini.
Ukungabikho komgca: Ukuxhalabisa, ukukhathazeka
Line Fate Line
Ebizwa ngokuba yi "Destiny" Line Line.
Ukubekwa: Iziko lePalati, umgca okanye umgca otyumbileyo uhlula isundu kwisigamu
Umgca wokugqibela udlalwa njengomgca ochanekileyo ohlula isundu ibe ngamacandelo amabini. Kodwa oko kwakungeke kube yinto engavamile ukuba nomgca wokuguqulwa okanye wokujika. Ingabonakala njengendlela yokulima ngaphandle kwendlela ehamba ngqo. Akukho nto. Umgca ochanekileyo ungabonisa isicwangciso sobomi esicacileyo ngakumbi, ngelixa umgca wokuguqulwa okanye ophazamisayo ungabonisa indlela yomntu ochitha ixesha ukuhlola okanye ukufuna indlela efanelekileyo yokuyenza.
Injongo Eyisiseko Yomdla Wokugqibela
Akunakucacisa ngokulula njengemigca emithathu yesigxina (intambo yenhliziyo, intloko yomgca, kunye nomgca wokuphila) umgca wakho wexesha elizayo uya kunika izibonakaliso zokukhulula okanye iingxaki onokujamelana nazo okanye amava njengoko uqhuba umkhondo wakho kunye / okanye injongo yobomi.
I-Absent Line: Ubomi obulungisiweyo
Umgca wokusilela: Ukungaphumeleli, ukuphazamiseka
Umgca ogqityiweyo: Ulwaphulo okanye iCommin Destiny
Umgca weNgcaciso: Ukulwa, Ukunyaniseka
Umda ophukileyo: I- Trauma, iNgcaciso enzima
Umgca woMgca: Uphakamileyo kunye neLows
Impumelelo, uMhlaba, Umthombo weTalente.
Ukubekwa: Ukufana kweFate Line
Umgca wenkcazo unikeza ukukhanya kwintlekele yomntu okanye i-destiny, okubonisa ubuchule okanye ubuchule bezobugcisa kuphucula injongo yobomi. Qaphela: Lo mgca awukho ngaso sonke isikhathi.
Kwakhona kuthiwa "i-Palmist Marriage Lines".
Uthando lwemigca yimizila emfutshane emide efunyenwe kwicala lesandla phantsi kwe-pinky.
Zingaphi iindlela zokuthandana onalo esandleni sakho? Imizila yamathando amaninzi ibonisa inani lobuhlobo obubalulekileyo obunalo (okanye uya kuba nalo) ebomini bakho. Ngamanye amaxesha kulula ukubona le migca ukuba ugoba i-pinky yakho encinane kwintendelezo yakho ukuze ubone i-line creases.
Qaphela ukubonakala kwemigqa nganye. Umzekelo: ulwalamano oluxhalabisayo luya kubonakala lubonakala njengowomgca ohlukileyo, odibeneyo, okanye ophazamisayo. Umgca wothando onqatshelwe ungabonisa ukuhlukana kweendlela ngokuqhawula umtshato okanye ukuhlukana. I-groove ejulile ngokuqhelekileyo ibonisa uphawu oluqinileyo lwentambo eqinile.
Imigca emancinci okanye ephosakeleyo i-branching kwi-line line uthando yilawa azalwa ngaphandle kobudlelwane. Le mizila yabantwana ayilula kulula ukubona ngenxa yokuba imincinci kwaye idla ngokukhawuleza imigca yokubambisa kumgca wothando.
Ukwahlula phakathi kwemizila emibini yothando kunokuxelela ibali ... izithuba zingabonisa ixesha elide phakathi kobudlelwane. I-gap ebanzi ingabonisa iminyaka emininzi, indawo encinane ingabonisa ixesha elincinane phakathi kothando. Umzekelo: Masithethe ukuba isibini esitshatileyo sitshata, kodwa ubudlelwane babo buphela ekuqhawuleni umtshato kwiminyaka emibini. Le ndoda yashada kwakhona kwiinyanga ezimbalwa, kodwa umfazi uhlala engatshatanga iminyaka engama-8 ngaphambi kokubandakanyeka kolunye ulwalamano. Ukuba ubungabheka kwiintendelezo zabo, mhlawumbi unokufumana imigca emibini yothando xa uhamba kunye nomntu, kodwa umfazi uya kuba ne-1/8 ukuya kwi-intshi ye-intshi phakathi kwemigca emibini yothando ngesandla.
Uthando lwemigca yakho yemephu impawu ezinzulu zentliziyo okanye ubudlelwane be-karmic. Gcina ukhumbule ukuba isigqubuthelo asikwahluli phakathi komtshato osemthethweni, umtshato oqhelekileyo okanye umtshato wothando. Imitshato yokulungelelanisa ayinakufumana imephu kwintendelezo. Ngamanye amazwi, umtshato ongenaluthando okanye ubuncinane-kunokubambisana okubalulekileyo ngeke kuboniswe njengomgca wokuthanda isandla.
Ukubekwa: Iimilo zecala phantsi kwe-pinky finger iminwe yezingane.
Imigca yabantwana ixhomekeke kwimigqa yomtshato okanye imida ebonisa ukuzalwa okubangelwa ulwalamano oluhambelanayo.
Imigca entendeni ebonisa abantwana ebomini bakho nayiphi na imizila engezantsi ngaphantsi komnwe we-pinky okanye phakathi kobabini be-pinky kunye nomunwe.
Imigca yezingane iyakunikwa okanye ihlulwe phezulu (okanye phantsi) ukusuka kumgca wothando.
Abantwana abonakaliswe entendeni yakho abayi kuzalwa ngawe, banokuthi bamkelwe, okanye abantwana abancinci. Naliphi na umntwana onokuzibophelela ngokukhethekileyo uya kuphawulwa kwimephu yempilo yakho yesundu. Aba bantwana abayiyo inzala yakho yezinto eziphilayo, kodwa bangaba ngabazukulu, abancinci okanye abazalwana, umntwana owamkelweyo, nokuba ngumntwana wommelwane onokuthatha inxaxheba kwintombi.
Abantwana abalahlekelwe ukutshatyalaliswa okanye ukuzalwa komzimba kungabonakaliswa esandleni. Le miqolo iya kubonakala ifutshane, i-fainter, okanye iphulwe. Ukuphila kwemigca yabantwana inokubonakala iphukile xa umntwana ejongelwa umngeni ngempilo. Khawucinge ngomntu obala obala njengomntu othe tye. Intloko yomntwana yayiya phezulu, iinyawo ezantsi. Ngoko ke, ukuba ubona ukuphuka okanye ukuphambukisa kumgca wecala kujonga ukubekwa kwezibonakaliso zempilo. Ingaba umqondiso entloko, entanyeni, esifubeni, esiswini, emlenzeni, okanye emadolweni? Oku kuya kuba yindawo apho umntwana angenakho ukukhathazeka ngempilo.
Ukubekwa: Ukufana nokuBomi boBomi (nakubandakanye) Intuition Line.
Intuition imigca ngokubanzi isithunzi somgca wokuphila ngoba intuition ibonisa ukuqonda okunzulu ebomini bomntu.
I-Basic Intuition Line
Okugqithiseleyo oku kuluhlu lubonakala (olujulile, elide) lomeleleyo uphawu lokuba amandla e-psychic ayimpawu ebalulekileyo kumntu. Imizila ye-Intuition ayilona elula ukuyifumana, kwaye ingase ingabikho ngokupheleleyo.
Ukufakwa: Umgca wecala uqala ngaphantsi komnxeba wempilo yomnxeba.
Umngeni wemingeni yempilo ngexesha lobomi bakho uboniswa ngamandla okanye ubuthathaka kweli nqanaba.
Ukongeza kwimpilo yomzimba yomntu, impilo yemali ingabonakaliswa kumgca wezempilo. Oku akumangalisiyo xa ucinga ngokutya kunye nendlela yokuphila yomntu ohluphekileyo uya kuba engenako kuba abanakho ukufikelela kwimithombo yezempilo abantu abacebileyo. Uxinzelelo lwaluphi na uhlobo luyintloko ebalulekileyo kwimpilo yomntu.
Iingxabano: Iinkxalabo zemali okanye ilahleko
I-Criss-Crosses: Iingozi ezenzekayo (ukuxhamla, ukungeniswa)
Iingqungquthela: Izibhedlele ezithintekayo, Izifo
Ukugubungela okanye umgca weNgcaciso: Iinkxalabo zezempilo ezininzi
Umgca ogqityiweyo: Ukugula okungapheliyo okanye okuphazamisayo
Umgca wempilweni engekhoyo udla ngokubonisa ukuba impilo ayikho imbambano.
Kwakhona kuthiwa "iRascettes".
Ukubekwa: Amacwecwe yimigca ekukhoneni kwesikrini sakho sangaphakathi.
Kuqhelekile ukuba ube neebhonki ezimbini okanye ezintathu. Nangona, abanye abantu bane-bracelet eyodwa kuphela, kwaye bane ezine okanye ngaphezulu. Amakhono amaninzi abonisa ubomi obude, amabhonkce aphukileyo abonisa impilo okanye impilo yezantsi.
Ukufakwa: Phakathi komgca we-Lower Palm phantsi kwe-Pinky Finger Travel Lines.
Imizila yokuhamba ibonisa ukuhamba, kodwa inokubonisa kuphela umnqweno wokuhamba.
Ukubekwa: Isangqa phakathi kwenkcazo kunye neminwe e-pinky.
Ubume be-Girdle yeVenus bufana nokukhanya kwenyanga okuxhomekeke kwinqanaba lentliziyo. Ukucwangciswa kwemigca yesigxina kuqinisa intliziyo.
I-Girdle yeVenus ivela kwizandla zabantu abathile abavame ukuba ngabaninzi. Ngokwempawu ingabonisa imfuno yokukhusela okanye ukudala imida yemimiselo.
Igalari yobuGcisa bendawo yangaphakathi
I-Apollo Health GoLite M2
Yintoni uJerrei Healing?
Iingelosi Zentsha - Idikethi yeeCard 52 zokuKhuthaza
Ukunyamezela iCardiomyopathy - I-Heart Heart Syndrome
Ukuthenga i-Racquet Racator ukuze uqale
Yintoni Oyaziyo Ngo-Aeneas?
Ukhuseleko oluqinileyo noKhuseleko loKhuseleko
Edward Teller kunye ne-Hydrogen bomb
Ngubani owafaka iiCigarettes ze-Electronic?
Ndinokunyuka njani ukuba ndiloyike ukuwa?
Iindidi ezahlukileyo ze-Conservatives
Ngaba Ixesha Likhona Ngempela?
Nxalenye ye si qingatha
Indlela yokuphumelela kwizibalo kunye neeklasi zamatriki
I-University of Liberty GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ingaba isigwebo sokufa siwukuphela koBulungisa baKubulali?
Izinto ezi-7 zokumazi malunga neGymnast Gymnast uGabby Douglas
Indlela yokwenza i-Snow Globe Yakho
"O du, umnikazi we-Abendstern" Iingoma kunye nokuguqulelwa kwimixholo
Izilwanyana zethu ezithandwayo ziya kuvuswa kunye nazo zonke izinto eziphilayo
Ukuqonda amaGama e-Cartridges